များလွန်းအတော်များများကဘုရား, များလွန်းအတော်များများဘာသာတရား: အားလုံးစစ်မှန်သော Be မရပါ
အကွိမျမြားစှာဘုရား & ဘာသာတရားဘာသာတရား, မဆိုဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့မအကြောင်းရင်းမှန်
လူအများစုဟာမှာအနည်းဆုံးဧကန်အမှန်အရှိနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းတလျှောက်လုံးအပေါင်းတို့နှင့်တကွကမ္ဘာတဝှမ်းကလူ့ဘာသာတရားအတွက်ခဲ့ပြီးမည်မျှမတူကွဲပြားမှုများ၏မွဲမွံခွငျးသတိထားမိကြသည်။ လူတိုင်းအပြည့်အဝကဤမတူကွဲပြားမှုသူတို့ဒါကြောင့်ကိုးကွယ်မှုနှင့်ထက်ထက်သန်သန်မှကိုင်သောဘာသာရေးယုံကြည်မှုများအဘို့အရှိနိုင်ပါသည်သမျှသက်ရောက်မှုတွေကိုတန်ဖိုးထားလျှင်ငါသို့သော်သေချာမသိဘူး။ သူတို့အခြားသူတွေရုံကိုးကွယ်မှုများနှင့်နည်းတူထက်ထက်သန်သန်အဖြစ်မိမိတို့၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်မှကျင်းပကြကြောင်း, ဥပမာ, နားလည်သဘောပေါက်ပါသလား
တစ်ခုမှာပြဿနာသိပ်ဘာသာရေးမတူကွဲပြားမှုမဟုတ်ဘဲပစ္စုပ္ပန်ထက်အတိတ်တွင်တည်ရှိသည်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဝေးသောအတိတ်၏ဘာသာတရားသို့သော် "ဒဏ္ဍာရီ" ထက်ဘာသာတရားကိုတံဆိပ်ကပ်ခံရဖို့နှင့်အရှင်ပယ်ချနေကြသည်လေ့ရှိပါတယ်။ ကြောင်းတံဆိပ်ယနေ့လူများကြူးသ, သငျသညျခရစျယာကိုဖော်ပြရန်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုမှန်းအဘယ်တစ်ခုစိတ်ကူးရမှ ဂျူး နှင့်အမျှမွတ်စ်လင်ယုံကြည်ချက် "ဒဏ္ဍာရီ။ " နည်းပညာပိုင်းအနေနဲ့တိကျမှန်ကန်ဖော်ပြချက်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့အဘို့ "ဒဏ္ဍာရီ" တစ်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ဖြစ်ပါတယ် "မှားယွင်းသော," ဤသို့မိမိတို့အဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များတံဆိပ်ကပ်ကြသောအခါကာကွယ်ဒဏ္ဍာရီတုံ့ပြန်။
ဤသည်, ထို့နောက်အကြှနျုပျတို့ကိုအကောင်းတစ်ဦးကိုသူတို့စဉ်းစားအဘယ်သို့သောအကြောင်းစိတ်ကူးပေးသည် Norse , အီဂျစ် , ရောမ, ဂရိနှင့်အခြားဒဏ္ဍာရီ: မိမိတို့၏အလွန်တံဆိပ် "မှားယွင်းသော" တစ်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုသူတို့အယုံကြည်ချက်ကိုမဆိုအလေးအနက်ပေးဖို့မျှော်လင့်ထားလို့မရပါဘူး ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ အမှန်မှာဤအယုံကြည်ချက်စနစ်များနောက်လိုက်အလေးအနက်ထားသူတို့ကိုဆကျဆံခဲ့ကြောင်းသျောဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဒီတော့သူတို့ကောင်းစွာဘာသာတရားထက်ကျော်လွန်သွားပါနှင့်လူများနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုလမ်းဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း All-လွှမ်းခြုံခဲ့သည်မျှတသောဖြစ်သော်လည်းကျွန်တော်တို့သည်ဘာသာတရားအဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတွေအလေးအနက်ထားသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုယူ။ ဟုတ်ပါတယ်, လူတွေပဲ (အခြားသူများကပိုစာသားကသူတို့ကိုယူမယ်လို့စဉ်အချို့ပိုပြီးသင်္ကေတအဖြစ်ပုံပြင်များရိပ်မိလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်) ကိုခရစ်ယာန်ဘာသာတူသောဘာသာတရား၏ခေတ်သစ်နောက်လိုက်အဖြစ် "စစ်မှန်သော" အဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဤယုံကြည်ချက်ကုသ။ ဤလူမှားပါသလော
သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကမှားသလော ခဲမည်သူမဆိုယနေ့လူတိုင်းကိုသူတို့မျက်မြင်လက်တွေ့မှားယွင်းနေခဲ့ထင်ရုံအကြောင်းကိုဆိုလိုသည်, သူတို့ကိုယုံကြည်သည်။ သို့သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာ, သူတို့ကရှင်းရှင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာတရား၏သမ္မာတရားကိုလက်ခံယုံကြည်ကြသည်။
အဲဒါကိုခရစ်ယာန်ဘာသာကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့မမျှတပုံရသည်ဆိုပါက ဂရိဒဏ္ဍာရီ ကိုကိုးကွယ်သောမှ monotheism: ကျွန်တော်တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျနှိုင်းယှဉ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာအစဉ်အဆက်နေသောလူအများစုအချို့သောမျိုးမဟုတ်ဘဲ monotheists ၏ polytheists သို့မဟုတ်နတ်ကိုးကွယ်ခဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့မှားအားလုံးတကယ်ရှိသနည်း အဘယ်အရာကိုကိုးကွယ်သောဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်ထက်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ် monotheism ပိုပြီးစေသည်?
သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ခေတ်ပြိုင်ဘာသာတရားနှင့်အတူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အများအပြားနှိုင်းယှဉ်ရှိပါတယ်: ယုဒလူတို့မနည်းဘုရားကိုကိုးကွယ်သောခရစ်ယာန်များသည်ထက်ပါ၏ ခရစ်ယာန်တွေကိုမနည်းဘုရားကိုကိုးကွယ်သောမူဆလင်များထက်ပါ၏ ဤအရှေ့အလယ်ပိုင်းဘာသာတရားများ၏နောက်လိုက်မပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းဘုရားကိုကိုးကွယ်သောထိုကဲ့သို့သောဟိန္ဒူနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်အာရှဘာသာတရား၏နောက်လိုက်ထက်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကိုအခြားသူများနည်းတူမိမိတို့ဘာသာတရား၏နည်းတူယုံကြည်တယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဘာသာတရား၏ "အမှန်တရား" နှင့် "တရားဝင်မှု" အဘို့ထိုသူတို့အားလုံးထံမှအလားတူအငြင်းပွားမှုများကိုနားထောငျဖို့ဘုံပါပဲ။
ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နောက်လိုက်များ၏ယုံကြည်ခြင်း၏အခြားသူများထက်ပိုပြီးယုံကြည်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်, အတိတ်သို့မဟုတ်ပစ္စုပ္ပန်အဲဒီဘာသာတရားမဆိုဂုဏျတငျနိုငျပါဘူး။ ကျနော်တို့သူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုအဘို့အသေခံရန်နောက်လိုက် '' ဆန္ဒအပေါ်အားကိုးလို့မရပါဘူး။
ကျနော်တို့လူရဲ့အသက်တာ၌အခိုင်အမာပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်သူတို့ဘာသာတရား၏အကောင့်ပေါ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်အားကိုးလို့မရပါဘူး။ သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှပြတ်ပြတ်သားသားအခြားမည်သည့်ထက်သာလွန်သောအငြင်းပွားမှုများရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမဆိုအခြား သာ. အစွမ်းရှိ၏ (နှင့် "ယုံကြည်ခြင်း" ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအပေါ်အလေးအနက်ဆိုသည်အရာမဆိုဘာသာတရားကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများ၏အခြေခံပေါ်မှာသာလွန်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကထွက်အောင်ကြိုးစားနေခြင်းမရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါတယ်) အရာပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားထောက်ပံ့ပါပြီ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသာလွန်အဖြစ်ဆိုအထဲကကောက်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အဲဒီဘာသာတရားမှပြည်တွင်းရေးဘာမျှသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ယုံကြည်သူများမှရှိသေး၏။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးပိုလုံခြုံကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုထိရောက်သည့်နိုင်ငံရေးမူဝါဒကကောက်နေများအတွက်လွတ်လပ်သောစံချိန်စံညွှန်းကိုသုံးပါသကဲ့သို့အကြှနျုပျတို့ကိုတဦးတည်းကောက်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အချို့လွတ်လပ်သောစံလိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲမဆိုဘာသာတရားသာလွန်သို့မဟုတ်မည်သည့်အခြားသူများထက်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်ကွောငျးတငျပွထားတဲ့နှိုင်းယှဉ်မဆိုစံချိန်စံညွှန်းများရှိနေကြသည်မဟုတ်။
အဘယ်မှာရှိကိုစွန့်ခွာရသနည်း ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်အဲဒီဘာသာတရားသို့မဟုတ်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များမဆိုကျိန်းသေမှားယွင်းသောဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြမထားဘူး။ အဘယ်အရာကိုမအလွန်အရေးကြီးလှသည်နှစ်ဦးစလုံး၏အကြှနျုပျတို့ကိုနှစျခုသောအရာတို့ကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာကတစ်ဘာသာကိုစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်သည်မည်မျှဖွယ်ရှိအကဲဖြတ်မှကြွလာသောအခါဘာသာတရား၏ကိုယ်စားအပေါ်အများအပြားဘုံတောင်းဆိုမှုများဆီလျှော်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ အဆိုပါသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့နောက်လိုက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၏အစွမ်းသတ္တိ, ဘယ်လိုဆန္ဒရှိလူတွေအတိတ်ထဲမှာဘာသာတရားကိုအဘို့အသေခံရန်ခဲ့ကြသည်ကဘာသာတရားအဖြစ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်နိုင်ဖွယ်စစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုမှကြွလာသောအခါကိုယ့်အရေးမထားဘူး။
ကျနော်တို့ဘာသာတရားရဲ့အကြီးအမတူကွဲပြားမှုကိုကြည့်သည့်အခါဒုတိယ, ကျနော်တို့ကိုသူတို့ရှိသမျှသည်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိသင့်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ထားရန်: ထိုလူအပေါင်းတို့သည်စစ်မှန်သောမဖွစျနိုငျ, ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမှားယွင်းသောနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကသူတို့အားလုံးသဟဇာတဖြစ်ကြောင်း "အဆင့်မြင့်အမှန်တရားတွေ" သွန်သင်ဟုဖွငျ့ဤန်းကျင်ရရန်ကြိုးစားပေမယ့်ဒီဘာသာတရားများ၏နောက်လိုက်ရိုးရှင်းစွာသောဤစွပ်စွဲ "အဆင့်မြင့်အမှန်တရားတွေ" သူတို့ဖြစ်ခြင်းသည့်ပင်ကိုယ်မူလတောင်းဆိုချက်များအတိုင်းလိုက်နာနောက်သို့မလိုက်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကရဲထွက်ဖြစ်ပါတယ် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤအရာအလုံးစုံဘာသာတရား၏သူများသည်ပင်ကိုယ်မူလတောင်းဆိုချက်များအားလုံးစစ်မှန်တဲ့မဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့ကသို့သော်အားလုံးမှားယွင်းသောနိုင်ပါတယ်။
ဤအမှုအလုံးစုံပေးထားသောလုံးကိုအခြားသူများအားမမှန်သောအဖြစ်ကုသနေစဉ်စစ်မှန်သောအဖြစ်ကုသထားရမည်သောဤဘာသာတရားများ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်အစဉ်အလာများထဲမှထားရုံတစျခုအနက် singling ဘို့မဆိုအကောင်း, အသံ, ဆင်ခြင်တုံတရား, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အခြေခံရှိသလော အမှတ်တဘာသာမှတဦးတည်းအစဉ်အလာများထဲမှအနက်ကိုတကယ်အားလုံးအပြီးစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်အံ့သောငှါယုတ္တိနည်းအမဖြစ်နိုင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ယုံကြည်ချက်၏ကြီးစွာသောမတူကွဲပြားမှုဒီမလုပ်ပဲသူမည်သူမဆိုမိမိတို့၏ရှေးခယျြသောဘာသာတရားပြတ်ပြတ်သားသားစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းသရုပ်ပြဖို့ရှိသည်မည်ဟုဆိုလိုသည်နှင့် လူအပေါင်းတို့သည်အခြားသူများထက်ပိုပြီးယုံကြည်သည်။
အိုင်းစတိုင်းဘုရားမဲ့ဝါဒီ, Freethinker ခဲ့သလား
Lee က v Weisman (1992) - ။ ကျောင်းကျောင်းဆင်းပွဲမှာဆုတောငျးခကျြ
ဘုရားမဲ့ဝါဒတစ်ခုသဘေ်ာ, ဘာသာရေး, ဒဿနိကဗေဒ, သဘောတရားရေးရာသို့မဟုတ်ယုံကွညျစနစ်ဖြစ်ပါသည်
တတိယခရူးဆိတ်စစ်ပွဲနှင့်နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေ 1186 - 1197: အကရူးဆိတ်စစ်ပွဲများ၏ Timeline ကို
သခင်, Liar, ဒါမှမဟုတ်ရူးရူး: CS Lewis က - သညျယရှေု Trilemma
ချားလ်စ်က de Montesquieu အတ္ထုပ္ပတ္တိ
သီလကျင့်ဝတ်: ငျြ့တရားနဲ့က Character
CS Lewis ကကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ ဘုရားမဲ့ဝါဒနှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီ
ဟယ်ရီပေါ်တာ Wicca သို့မဟုတ်စုန်းအတတ်မြှင့်တင်ပါသလား?
အဘိဓါန်ပွငျသစျ theme ပွဲနေ့များ
5 မကောင်းပါလေ့လာမှုအလေ့အထအဘို့ကြီးသော Solutions
ဂျော့ခ်ျ Westinghouse - လျှပ်စစ်များ၏သမိုင်း
All-အချိန် Associated Press ကအမျိုးသားကောလိပ်ဘောလုံးချန်ပီယံ
Grinnell ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ထိပ်တန်း 10 Heist, Movies ၏အဓိပ္ပါယ်စာရင်း
အဆိုပါ Huguenots ဘယ်သူကသလော
တစ်ဦး Relational Database ဟာဘာလဲ,
အဆိုပါ Homestead သံမဏိ Strike
အဆိုပါအသက် 15 အကြီးမြတ်ဆုံး Batman ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အဖုံး
Petra Kvitova ဓါတ်ပုံများ: လေဖြတ်ခြင်း၏ရုပ်ပုံပြခန်း
ချားလ်စ် Follen McKim, သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ဗိသုကာပညာ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: အ Bismarck ပင်လယ်ပြင်၏တိုက်ပွဲ